Madaxweyne Erdogan oo furay Masaajid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Yurub (Daawo Sawirro) – Xeernews24
Madaxweyne Erdogan oo furay Masaajid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Yurub (Daawo Sawirro)
29. September 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa maanta magaalada Cologne ee dalka Jarmalka ka furay mid ka mid ah masaajidada ugu weyn qaaradda yurub.
Furitaanka masaajidkan ayaa ka danbeysay kadib marki uu madaxweyne Erdogan ku tagay Jarmalka booqasho muran badan ka dhex-dhalisay gudaha Jarmalka, markii ay soo baxeen kumanaan ruux oo mudaaharaadayaal ah oo qaarna ay kasoo horjeedaan Erdogan qaarna ay taageerayaan.
Ciidamo farabadan oo boolis ah ayaa la dhigay magaalada Cologne si ay u ilaaliyaan amaanka.
Wadahadallo ay Jimcihi shalay wada yeesheen madaxweyne Erdogan iyo janselerka Jarmalka Angela Merkel ayay labada hogaamiye muujiyeen in ay yar isaga soo dhawaadeen mowqifyadi ad-adkaa ee dhinaca siyaasadda, hase yeeshee hogaamiyaha Jarmalka ayaa carrabka ku adkeysay in ay wali jiraan kala duwanaansho qoto dheer oo ku saleysan dhinacayda xuquuqda madaniga iyo arrimo kale.
Ku dhawaan 10 kun oo mudaaharaadayaal kasoo horjeeda Erdogan ayaa isugu soo baxay waddooyinka Cologne. Dadkaan ayaa ku eedeeyay madaxweyne Erdogan inuu caburiyay saxaafadda, gaboodfallo dhinaca xuquuqda aadanah iyo gacanta adag ee ay dowladdu kula dhaqanto Kurdiyiinta laga tirada badanyahay.
Kumanaan kale oo taageersan madaxweynaha Turkiga ayaa iyana isugu soo baxay bannaanka masaajidka weyn ee magaalada Cologne, ka hor inta uusan maanta madaxweyne Erdogan si rasmi ah xariga uga jarin masaajidkaasi.
In ka badan 25 kun oo ruux ayaa la sheegay in ay ka qeybgaleen xaflada furitaanka masaajidka Cologne oo ka mid noqday masaajidada ugu waaweyn ee qaaradda Yurub.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/cologne.jpg 360 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-29 23:44:402018-09-29 23:44:40Madaxweyne Erdogan oo furay Masaajid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Yurub (Daawo Sawirro)
Cabdi Iley oo ilmayn oo codsi iyo baryootaan soo dirtay Boqolaal qof ayaa ku dhintay Tsunami ku dhufatay Jasiirada Pelu (Daawo Sawi...